शोषण र शक्तिको दुरुपयोग हुँदा किन परमेश्वर केही गर्नुहुन्न?
बलियाहरूले कमजोरहरूमाथि शोषण गरेको केही कहालीलाग्दो घटना बाइबलमा बताइएको छ। त्यस्तो शोषणमा पर्ने एक जना त नाबोत भन्ने व्यक्ति हुन्‌। * ईसापूर्व १० औं शताब्दीमा इस्राएलका राजा आहाबले नाबोतको दाखबारी हडप्न चाहे। त्यसैले आहाबले आफ्नी पत्नी ईजेबेललाई नाबोत र तिनका छोराहरूलाई मार्न अनुमति दिए। (१ राजा २१:१-१६; २ राजा ९:२६) आहाबले त्यो हदसम्म आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दा पनि परमेश्वरले किन केही नगर्नुभएको?
“कहिल्यै झूट नबोल्नुहुने परमेश्वर।”—तीतस १:२
एउटा महत्त्वपूर्ण कारण विचार गरौं: परमेश्वर झूट बोल्नुहुन्न। (तीतस १:२) तर तपाईं भन्नुहोला ‘दुष्टहरूको शोषणसित यस कुराको के सम्बन्ध?’ परमेश्वरले सुरुमै मानिसजातिलाई उहाँविरुद्ध विद्रोह गरेमा दुःखदायी नतिजा अर्थात्‌ मृत्यु भोग्नुपर्नेछ भनेर चेतावनी दिनुभएको थियो। अदनको बगैंचामा भएको विद्रोहपछि परमेश्वरले भन्नुभएझैं कोही पनि मृत्युबाट बच्न सकेको छैन। वास्तवमा, मानव इतिहासमा सबैभन्दा पहिलो मृत्यु पनि शोषणकै कारण भएको थियो जब कयिनले आफ्नो भाइ हाबिललाई मारे।—उत्पत्ति २:१६, १७; ४:८.
त्यसबेला देखि मानिसको अवस्थाबारे परमेश्वरको वचन बाइबल यसो भन्छ: “एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई दु:ख दिने अधिकारको समय थियो।” (उपदेशक ८:९) के यी शब्दहरू साँचो साबित भएका छन्‌? परमेश्वरले इस्राएल राष्ट्रलाई तिनीहरूका राजाहरू शोषणकारी हुनेछन्‌ र तिनीहरू परमेश्वरलाई पुकार्न बाध्य हुनेछन्‌ भनेर चेतावनी दिनुभयो। (१ शमूएल ८:११-१८) बुद्धिमान्‌ राजा सुलेमानले समेत आफ्ना जनहरूलाई गह्रौं जुवा बोकाइदिए। (१ राजा ११:४३; १२:३, ४) आहाब जस्ता दुष्ट राजा त अति नै शोषणकारी थिए। विचार गर्नुहोस्: परमेश्वरले त्यस्ता दुष्ट कार्यहरू सबै रोक्नुभएको भए के उहाँले आफूलाई झूटो साबित गरिरहनुभएको हुने थिएन र?
“एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई दु:ख दिने अधिकारको समय थियो।”—उपदेशक ८:९
नबिर्सनुहोस्, मानिसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मात्र परमेश्वरको सेवा गर्छ भनेर पनि सैतानले दाबी गरेको थियो। (अय्यूब १:९, १०; २:४) परमेश्वरले आफ्ना सेवकहरूलाई सबै प्रकारका शोषणबाट जोगाउनुभएको भए सैतानको दाबीलाई अझै बल पुगिरहेको हुने थिएन र? परमेश्वरले सबै मानिसलाई सबै प्रकारका शोषणबाट जोगाउनुभएको भए के उहाँ अझै ठूलो झूटको लागि जिम्मेवार हुनुहुने थिएन र? त्यस्तो सुरक्षा पाउँदा मानिसले परमेश्वरको डोऱ्याइविना नै सफलतासाथ शासन गर्न सक्छ भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ। तर परमेश्वरको वचनले ठीक विपरीत कुरा बताउँछ, मानिसले आफ्नो पाइलालाई ठीक मार्गमा हिंडाउन सक्दैन। (यर्मिया १०:२३) हामीलाई परमेश्वरको राज्य चाहिन्छ। त्यसपछि मात्र सबै अन्याय, अत्याचारको अन्त हुनेछ।
के यसको अर्थ परमेश्वरले शोषणविरुद्ध केही गर्नुहुन्न? त्यसो त होइन। उहाँले गर्नुहुने दुइटा कुरा विचार गर्नुहोस्: पहिलो, उहाँले शोषण हुनुको खास कारण खुलाइ दिनुहुन्छ। उदाहरणको लागि, नाबोतविरुद्ध ईजेबेलले चालेको हरेक दुष्ट चाल उहाँले बाइबलमा उदाङ्ग पारिदिनुभयो। त्यस्ता दुष्ट कार्य पछाडि अर्को एक शक्तिशाली शासक छ र त्यो आफ्नो परिचय लुकाउन चाहन्छ भनेर पनि बाइबलमा बताइएको छ। (यूहन्ना १४:३०; २ कोरिन्थी ११:१४) बाइबलमा त्यसलाई सैतान भनेर चिनाइएको छ। दुष्टता र शोषणका साथै यसको वास्तविक स्रोतको पर्दाफास गरेर परमेश्वर हामीलाई दुष्टताबाट जोगिन मदत गर्नुहुन्छ। यसरी उहाँ हाम्रो अनन्त भविष्यलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ।
दोस्रो, परमेश्वरले शोषणको अन्त गर्नुहुन्छ भनेर आशा गर्न सक्ने ठोस कारण पाउँछौं। उहाँले आहाब र ईजेबेललगायत अन्य थुप्रैका कर्तुत उदाङ्ग पारिदिनुभयो, तिनीहरूको इन्साफ गर्नुभयो र सजाय दिनुभयो। यसबाट उहाँले कुनै दिन दुष्ट काम गर्ने सबैलाई सजाय दिने प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुन्छ भनेर ढुक्क हुन सक्छौं। (भजन ५२:१-५) साथै उहाँलाई माया गर्नेहरूका लागि चाँडै दुष्टताका असरहरू हटाउनुहुनेछ भन्ने भरपर्दो आशा पनि उहाँ प्रदान गर्नुहुन्छ। * त्यसैले कुनै दिन विश्वासी नाबोत र तिनका छोराहरू अन्याय मुक्त संसारमा सधैंभरि बाँच्न पाउनेछन्‌।—भजन ३७:३४.
^ अनु.3यसै अङ्कमा “तिनीहरूको विश्वास अनुकरण गर्नुहोस्” लेख हेर्नुहोस्।
^ अनु. 8 यहोवाका साक्षीहरूद्वारा प्रकाशित बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको अध्याय ११ हेर्नुहोस्।